Kooxda Soomaaliya Oo Laga Reebay Ciyaaraha Bariga Iyo Bartamaha Afica CAF | RBC Radio	Home
Thursday, October 4th, 2012 at 01:18 am	/ 2 Comments Wednesday, October 10th, 2012 at 08:20 am Kooxda Soomaaliya Oo Laga Reebay Ciyaaraha Bariga Iyo Bartamaha Afica CAF
Nairobi (RBC Radio) Xiriirka kubadda cagta bariga iyo bartamaha Africa ee loo soo gaabiyo CAF, ayaa ka reebay tartanka 17-jirada kooxda Soomaaliya, kaddib markii lagu helay dhaqan aan ku fiicneyn ciyaaraha.
Waxa socday baaritaan tan iyo markii kooxda Soomaaliya ay ka badisay dhigooda dalka Sudan bishii la soo dhaafay ciyaar ka tirsan isreeb-reebka koobka Confederation of African Football.
Guddiga isuduwida CAF ayaa codsi u diray xiriirka kubadda cagta Soomaaliya ee FA-da, kaasoo ku saabsanaa in baaritaan lagu sameeyo da’da ciyaartoyda ka qeybgashay kulankaas, maadama la sheegay ciyaartoydii ka qeybgashay kulankaas ay ka da’weynaayeen 17-sano.
Si kastaba, codsigaas wax jawaab ah kama keenin xiriirka Soomaaliyeed ee Kubadda Cagta, sidaasna Guddiga CAF wuxuu shaaciyay in laga reebay kooxda Soomaaliya tartanka Caf.
Waxa loo ogolaaday kooxda Sudan in ay ka sii qeybgasho ciyaaraha kale.
Sudan waxa ay is arkindoonaan kooxda Algeria, lugta koobaad ayaa waxa ay ka dhici doontaa 19, 20, 21 bisha October 2012 , halka lugta labaad ay dhici doonto 2, 3, 4 November 2012.
Tags: Kooxda Soomaaliya Oo Laga Reebay Ciyaaraha Bariga Iyo Bartamaha Afica CAF	6 Responses for “Kooxda Soomaaliya Oo Laga Reebay Ciyaaraha Bariga Iyo Bartamaha Afica CAF”
Kooxda Soomaaliya Oo Laga Reebay Ciyaaraha Bariga Iyo Bartamaha Afica CAF | Gubta News Network says:	October 10, 2012 at 8:58 am	[...] See more here: Kooxda Soomaaliya Oo Laga Reebay Ciyaaraha Bariga Iyo Bartamaha Afica CAF [...]
nin waalan says:	October 10, 2012 at 11:13 am	Sheekadaan waxaa faafiyey soomaali oo yiri somali team waa ay ka waa waynaayeen 17 jir.
Suudaanta ayaaba u e keyd niman 30 meeyadii ku jira. Afrika oo dhan ciyaaraha youthka dad waa wayn ayaa uga qeyb gala. Waxa aan maqlay in soomaali qurbo joog ah ay u gudbiyeen cabashadaas iyagoo ka xun in qaar ka mid ah wadankoodu guuleysto
aboy@_+161 says:	October 10, 2012 at 12:35 pm	taas waa dulmi cad oo lagula kacay qarankeena waa sax way jiraan laba laacib oo 2009 horay u ciyaray tartankan oo kale lkn guusha waxa gaaray under 17yrs runtii. Oo qaramada kaleba waxa u ciyarayey rag 20yrs kor u dhafay. Sababtu waxay tahay dawladena oo danba kalahayn sportiga. Waayo wax cilaajayn ah masamay, sorry walahi wiilasha da’da yara ee gesiyasga aha in laniyad jebiyo.
qabiil haku feera jabin says:	October 10, 2012 at 7:22 pm	Ku Wadani Xalaal ah
wax waalan kkkkkkkkkkk waa kufaraxsanahay Reysalwasaaraha kulahaa waraa meesha ciyaaro ayaa laga hadalayaa ee orod xabsiga dhimirka tag inaa waalatay ku wargali halagu daaweeyee kkkkkkkkkkkk Puntland iyo waxaa la wareegeeyso meelahaas la’aad Dowlad somaliyeed ayaa noo dhisan Maamul goboleed labaryaayo malahan waa la wada afuufayaa. adiga lee cidaada haku xir xirtaan waa walatay mowduc ciyaaro ka hadlaayo siyaad la imaanaysaa kkkkkk war kan hala xir xiro
muraad Bari says:	October 11, 2012 at 1:48 pm	kk war awalba waxa wada ciyaarayey (khartoum state Vs Banadir state) kkk